Akụkọ - 2021 Quanzhou Seminar Azụmaahịa Ofesi
Nyocha gbasara ihe egwu dị na iwu na nkwekọrịta azụmaahịa mba ofesi-onye ọka iwu Huang Qiang
Ajụjụ ndị a na -ajụkarị: nhazi nkwekọrịta, akparamagwa mkpọsa, okwu ụlọ ọrụ, nnyefe na -egbu oge, okwu dị mma, usoro azụmaahịa, ego ụgwọ, mbufefefefe ụgwọ, ụgwọ maka imebi nkwekọrịta, ma ọ bụ esemokwu azụmahịa, okwu amụma mkpuchi.
E guzobere nkwekọrịta ahụ: Ikpe 1 bụ na ụlọ ọrụ nkwekọrịta na aha ụlọ ọrụ egosiri na akara abụghị aha ụlọ ọrụ zụrụ ahịa, enweghị ike iji nkwekọrịta ahụ gosipụta nkwenye nke nkwekọrịta nkwekọrịta n'etiti ndị otu abụọ.
Ikpe 2 Onye na -azụ ahịa bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ahụ, na mgbakwunye nke webụsaịtị gọọmentị nke onye zụrụ ihe dị iche, na -enwe obi abụọ njirimara onye kọntaktị ahụ. Onye na -eso ụzọ nke onye na -enyefe akwụkwọ ịkwụ ụgwọ, akara ekwentị adabaghị na onye zụrụ ya, onye na -ebubata ya enweghị ike igosipụta na asaa emezuola ọrụ nnyefe nye onye zụrụ ya nakwa na onye zụrụ ahịa anatala ngwongwo ahụ.
一, Nyochaa ọnọdụ bụ isi nke ndị otu nkwekọrịta ahụ
1) Aha: Ọ na -agbanwe agbanwe? Enwere mkpụrụedemede dị iche iche? Enwere ihe mgbochi ma ọ bụ karịa, ntụpọ, oghere, akara ndị ọzọ, wdg?
2) Akụ azụmaahịa: Ma ngwaahịa azụtara kwekọrọ na azụmaahịa bụ isi, yana onye nọ n'ihe egwu wayo.
3) Email: Ọ bụ email ụlọ ọrụ? Mgbakwunye ya na nke onye na -azụ ihe ka ọ dabara nke ọma? Mgbakwụnye ahụ yiri naanị, na ohere nke igwu wayo ka ukwuu. N'ọnọdụ ndị dị oke njọ, onye zụrụ ahịa edebanyeghị igbe ozi ụlọ ọrụ, onye nke atọ debakwara aha n'akwụkwọ aghụghọ.
4) Nọmba akaụntụ ịkwụ ụgwọ: Lelee ma ha niile na -agbanwe agbanwe, na agaghị enwekwa iche na akara edemede.
5) Adresị edebanyere aha: Ọ bụ nke steeti dị iche na onye zụrụ ahịa (dịka United States, steeti dị iche iche nwere ike ịdebanye aha ụlọ ọrụ nwere otu aha)? Ọ nwere mba dị iche iche (dịka Uganda na Kenya, nwere otu aha mana mba dị iche iche, agaghị abụ otu ụlọ ọrụ?
6) Onye nnọchite anya: Enwere nnukwu ihe egwu maka ebufe ngwongwo na mba nke atọ? Ọ bụrụ na ezigara ngwongwo ndị ọzọ, enwere ntuziaka doro anya n'aka onye zụrụ ya!
7) Onye bịanyere aka n'akwụkwọ; ọ bụ onye na -elekọta/onye nnọchite anya iwu? Ọ bụ nke onye ọzọ, enwere akwụkwọ ikike? Ọ bụrụ na enweghị ike ikwenye ya, ekwenyela na azụmaahịa a bụ eziokwu site na ozi kọntaktị onye zụrụ ya?
1) webụsaịtị gọọmentị nke onye zụrụ ahịa, ọtụtụ ụlọ ọrụ ga -enwe (oke ikpe ahụla wayo webụsaịtị adịgboroja) 2) Nweta akụkọ kredit nke onye zụrụ ya.
Ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọha nke gọọmentị nke obodo onye zụrụ ya.
United States: SEC.gov ma ọ bụ odeakwụkwọ nke New York State Corporation na Business Entity Search United Kingdom: Ụlọ ụlọ, www.gov.uk
Singapore; Akaụntụ na nchịkwa ụlọ ọrụwww.acra.gov.sg
Okwu dị mma:
1) Oge mkpesa ogo ekwenyero bara uru na enweghị mmerụ ahụ
2) usoro nyocha ekwenyero
Kọwaa ụlọ ọrụ nyocha, ụzọ nyocha, ụkpụrụ nyocha, wdg.
3) Na -arụ ọrụ nyocha nke ọma iji zere esemokwu mma
Nnyocha ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ, na ndị ọzọ na-egosi na enweghị nsogbu na ịdị mma tupu mbupu. Akara akara maka nlele nlele, na -enweta asambodo nke kwekọrọ na ụlọ ọrụ gọọmentị.
4) Lezienụ anya na ichekwa ihe akaebe e dere ede.
Ajụjụ ụlọ ọrụ:
Onye ahịa na -enyere ụlọ ọrụ ndị ọzọ aka ka ha zụrụ dịka onye nnọchi anya ya. N'ọnọdụ nsogbu, onye na -ere ahịa nwere ike họrọ onye ọ bụla na -ahụ maka ya (onye zụrụ ahịa, ma ọ bụ ụlọ ọrụ zụrụ ahịa, mana ekwesịrị ka ekwenye ma kwado ya site na nkwa kredit). Ozugbo ahọpụtara ya, enweghị ike ịgbanwe ya.
1) Ekwenyela oge ịkwụ ụgwọ doro anya. Enwere nkwenye yana ọnọdụ agbakwunyere na nkwekọrịta edoghị anya?
2) Iwu mbupu ọtụtụ na ogbe, attentionaa ntị na nhazi oge ya na onye zụrụ ahịa iji gosi ego ole o ji
3) Lezienụ anya ka atụnyere oge ịkwụ ụgwọ na ụgwọ ụgwọ yana oke kredit nke Inye Ebe E Si Nweta China kwadoro.
Ndụmọdụ maka igbochi ihe egwu US
1) Tinye mkpuchi ọzọ
2) Ọ bụrụ na ị nwere ike ekwe nkwa ya
3) Bulie mmata maka nchedo ikike iwu
4) Nkwado na nyocha nke ntozu ndị zụrụ ahịa
Inye ego mkpuchi China Ebe E Si Nweta na Ngwaahịa na Ọrụ Digital Dijitalụ, akpa HP: ngwugwu Ọrụ Ozi, Seavo World APP, Obere na Micro Academy.
1) Na -achọ ndị ahịa esenidụt
2) Nyocha ihe egwu na ịdọ aka na ntị n'oge
3) Chọpụta ihe egwu dị na ndị na -azụ ahịa esenidụt.
Na mmechi, anyị bụ ndị nrụpụta yana kwa ụlọ ọrụ azụmaahịa na akụkụ ime ime, ihe anyị kwesịrị ichebara echiche abụghị naanị inye ndị ahịa anyị ndị ọrụ na -abaghị uru, sprockets, rollers, assy njikọ njikọ na akụkụ ndị ọzọ kamakwa ọ ga -emetụtakwa ihe egwu dị na azụmahịa ahụ.
Naanị n'ụzọ dị otu a ka enwere ike hụ na azụmahịa mmeri na imekọ ihe ọnụ ga-adịte aka.
Oge ezipụ: Jul-18-2021